Homeसमाचारपन्जाबी गाएकले गाए नेपाली गीत ‘फुलबुट्टे सारी’, बन्यो भाइरल (हे’र्नुहोस् भिडियो)
March 30, 2021 admin समाचार 5911
पछिल्लो समय नेपाली संगी’तप्रेमी माँझ लोकप्रिय रहेको गीत ‘फुल बुट्टे सारी’ बोलको गीतलाई अहिले सवै दर्श’कहरुले मन पराएका छन ।
पछिल्लो स’मय हरेक उमेर समूहका व्यक्तिको जनजिब्रोमा बसेको फूल बुट्टे सारी गीतले टिकटकजस्ता सामाजिक स’ञ्जालमा व्यापकता पाइरहेको छ । महिला तथा पुरुष दुवैको स्वरमा सार्वजनिक भएको सो गीतले छोटो समयमै यु’ट्युबमा करोड बढी भ्युज पाएको हो ।
सार्वजनिक अघि’ल्ला दुइ भर्सनले एक करोड बढी भ्युज पाईसक्दा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको हो । मेल र फिमेल भर्सनको लोक’प्रियता पश्चात यो गीत चाइल्ड र लेजेण्ड’री भर्सनमा समेत आएको थियो ।यी सवै भर्सनलाई अहिले दर्शन श्रोताले निकै नै रुचा’एका छन ।
त्यस्तै अहिले पछि’ल्लो समय यसलाई एक अफ्रिकी गायिकाले समेत गाएकी थिइन । उक्त भर्सन पनि दर्शक श्रो’ताले निकै नै मन पराएका थिए । अहिले आएर यो गीतको पन्जा’वी भर्सन पनि उत्तिकै भाइरल हुँदै गएको छ ।
May 2, 2021 admin समाचार 6543
जो पनि चाहन्छन कि सन्तान आफ्नो इच्छा अनुसार होस् । कसैलाई छोरा’को रहर हुन्छ भने कसैलाई छोरीको । चिनिया बैज्ञानिकहरुका अनुसार छोरा वा छोरीको छनौट आफ्नो इच्छामा भर पर्दछ । तपाईं छोरा चाहनु हुन्छ कि
ठुलै हि’म्मत बोकेर आउनुपर्छ भन्दै नायीका प्रियंका कार्की कसको पक्ष्यमा बोलिन ?
March 4, 2022 admin समाचार 1505
यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अ’भिनेता पल शाह प्रकरणले तरंगित छ । एक ना’बालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध ज’ब’र्ज’स्ती क’र’णीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हि’रासतमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा
अधिराजकुमार धिरेन्द्रकी कान्छी छोरी हे’र्नुहोस् अमेरिकामा के गर्छिन ? भिडियो
May 11, 2021 admin समाचार 6179
पूर्व अधिराज’कुमार धिरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी उशाना शाह ‘बुब्बा शाह’ सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशिल भइरहन्छिन् । उनी युट्युबर पनि हुन् । उनले आफ्ना गतिवि’धिको भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्छिन् ।इन्टाग्राम र यु’ट्युबमा उनी बढी देखिन्छिन् । मोटी